हाल संसारभरि विभिन्न धार्मिक समुदायहरूमा झूटा ले धोखा दिएका घटनाहरू धेरै छन्। यो धोखा वास्तवमा के हो भनी बुझ्न नसकेर धेरै मानिसहरू यी झूटा ख्रीष्टहरूको पछि लागेका छन्, यसरी प्रभु येशूको अगमवाणी पूरा गर्दैछन्: “अनि यदि कुनै मानिसले तिमीहरूलाई, हेर, ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ वा त्यहाँ हुनुहुन्छ भनी भन्छ भने विश्‍वास नगर्नू। झूटा ख्रीष्टहरू र झूटा अगमवक्ताहरू आउनेछन् र ठूलठूला चिन्हहरू र चमत्कारहरू देखाउनेछन्; ताकि सम्भव भए, तिनीहरूले चुनिएकाहरूलाई नै छल्न सकून्” (मत्ती २४:२३-२४)। त्यसैले हामी के विश्‍वास गर्छौं भने, जो प्रभुको आगमन हो भनी गवाही दिइन्छ त्यो निस्सन्देह एक झूटा ख्रीष्ट हो, र तिनीहरूलाई खोज्नु र तिनीहरूलाई जाँच्नु कुनै आवश्यक हुँदैन। के हामीले यो विश्‍वास गर्नु गलत छ? | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
साँचो ख्रीष्ट र झूटा ख्रीष्टहरूको बीचको भिन्‍नता
हाल संसारभरि विभिन्न धार्मिक समुदायहरूमा झूटा ले धोखा दिएका घटनाहरू धेरै छन्। यो धोखा वास्तवमा के हो भनी बुझ्न नसकेर धेरै मानिसहरू यी झूटा ख्रीष्टहरूको पछि लागेका छन्, यसरी प्रभु येशूको अगमवाणी पूरा गर्दैछन्: “अनि यदि कुनै मानिसले तिमीहरूलाई, हेर, ख्रीष्ट यहाँ हुनुहुन्छ वा त्यहाँ हुनुहुन्छ भनी भन्छ भने विश्‍वास नगर्नू। झूटा ख्रीष्टहरू र झूटा अगमवक्ताहरू आउनेछन् र ठूलठूला चिन्हहरू र चमत्कारहरू देखाउनेछन्; ताकि सम्भव भए, तिनीहरूले चुनिएकाहरूलाई नै छल्न सकून्” (मत्ती २४:२३-२४)। त्यसैले हामी के विश्‍वास गर्छौं भने, जो प्रभुको आगमन हो भनी गवाही दिइन्छ त्यो निस्सन्देह एक झूटा ख्रीष्ट हो, र तिनीहरूलाई खोज्नु र तिनीहरूलाई जाँच्नु कुनै आवश्यक हुँदैन। के हामीले यो विश्‍वास गर्नु गलत छ?
अघिल्लो: भर्खरै, मैले सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका धेरै वचनहरू पढेको छु, र तिनमा शक्ति र अख्तियार दुवै मैले पाएको छु। उहाँका प्रत्येक वाणीहरू सत्य छन्, ती साँच्चै परमेश्‍वरको आवाज हुन्, र सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर नै फर्केर आउनुभएको प्रभु येशू हुनुहुन्छ। तर मैले एउटा कुरा बुझेको छैन: अहिले फर्केर आउनुभएका प्रभु येशू भएको बहाना गर्ने कतिपय मानिसहरू, र तिनीहरूले पनि केही वचनहरू बोलेका छन्। तिनीहरूका केही वचनहरूका पुस्तकहरू बनाइएको छ, र धेरै मानिसहरूलाई झुक्याएर तिनीहरूको पछि लाग्ने बनाइएको छ। हामी झूटा ख्रीष्टहरूका वचनहरू वास्तवमा के हुन् भनी कसरी भन्न सक्छौं?
भर्खरै, मैले सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरका धेरै वचनहरू पढेको छु, र तिनमा शक्ति र अख्तियार दुवै मैले पाएको छु। उहाँका प्रत्येक वाणीहरू सत्य छन्, ती साँच्चै परमेश्‍वरको आवाज हुन्, र सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वर नै फर्केर आउनुभएको प्रभु येशू हुनुहुन्छ। तर मैले एउटा कुरा बुझेको छैन: अहिले फर्केर आउनुभएका प्रभु येशू भएको बहाना गर्ने कतिपय मानिसहरू, र तिनीहरूले पनि केही वचनहरू बोलेका छन्। तिनीहरूका केही वचनहरूका पुस्तकहरू बनाइएको छ, र धेरै मानिसहरूलाई झुक्याएर तिनीहरूको पछि लाग्ने बनाइएको छ। हामी झूटा ख्रीष्टहरूका वचनहरू वास्तवमा के हुन् भनी कसरी भन्न सक्छौं?
परमेश्‍वरका प्रासंगिक वचनहरू: जो देहधारी परमेश्‍वर हुनुहुन्छ उहाँमा परमेश्‍वरको सार हुनेछ, र जो देहधारी परमेश्‍वर हुनुहुन्छ उहाँमा...